Liberty: Gaari Hawada iyo dhulkaba ku soconaya
Shirkad laga leeyahay dalka Holland ayaa markii ugu horreysay taariikhda inta la ogyahay sameyneysa baabuur sida diyaaradda oo kale u duulaya, waxaana shirkaddaas soo gaaraya dalabaad aad u fara badan.
Shirkaddan oo lagu magacaabo PAL-V ayaa markii ugu horreysay tijaabisay gaarigeeda cusub ee circa iyo dhulkaba ku socda sanadkii 2012, waxaana ay ogaatay in dadka ay xiiseyn doonayaan gaariga noocan oo kale ah.
Gaarigan cusub waxaa loogu magac daray ‘Liberty’ oo la macno ah ‘Xuriyad’ waxaana arrintaasi lagu fasiray in qofka gaarigan iibsada uusan u joojin doonin xernaashaha iyo mashquulka wadooyinka.
Goor dhaw ayaa la filayaa in baabuurkan la suuq keeno, balse shirkadda PAL-V ayaa sheegtay in 90 baabuur kaliya ay soo saari doonto marka ugu horreysa. Waxaana la sheegayaa in qiimaha gaariga uu ka bilaaban doono $400,000 iyada oo laga yaabo in uu gaaro illaa iyo $600,000.
‘Liberty’ ama ‘Xuriyad’ marka uu socda waxa uu u egyahay baabuur sadex lugood leh, marka uu hawada ku jirana waxa uu u egyahay elekobtarka. Sida PAL-V ay sheegtayna culeyska gaariga waxaa lagu qiyaasay in uu yahay 680kg, halka 180km uu ordi karo saacaddiiba.